Sei Train Travel In Germany Is Amazing | Chengetedza Chitima
musha > Rovedza Kufamba Germany > Sei Train Travel In Germany Is Amazing
Germany ine makomo makuru, kufema-kutora kumaruwa, uye cosmopolitan maguta izvo kuti chitima kufamba ikoko ainakidza ruzivo. Pane zhinji nakisisa nzvimbo kuona kusanganisira Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, uye Frankfurt, nevamwe vazhinji. hotspots izvi uye maguta maduku zvose interconnected patsime-vakarongeka mhoro-nokukurumidza chitima hurongwa. Izvi zvinoita chitima kufamba mu Germany saka nyore. Pano anoperekedza kuti holidaymakers kuti chitima kufamba mu Germany kuitira une kupfuura nakidza rwendo zvinogoneka.
The siyana nezvitima iripo
The German chitima Network iri kushanda ne Deutsche rautateiden. Izvi zvinopa vakawanda chitima mhando kutakura iwe masikati nousiku. Huru njanji samambure muGermany rinoumbwa of zvenharaunda nezvitima (dzakadai remunharaunda Express) uye intercity nezvitima. Intercity nezvitima anoshanda muno uye rese pakati maguta anokosha.
Panewo dzimwe nzira Dzidzisai kufamba mu Germany akadai mudzimba mukuru-nokukurumidza nezvitima, The chando (InterCity Express). Ndiwo inonyanya kufarirwa chitima muGermany, unobva maguta anokosha pane kumhanya. izvi soro-nokukurumidza nezvitima rwendo aimhanya kusvikira 200mph (320 km / h).
Ko Ndinofanira kuita chigaro Reservations pamusoro nezvitima German?
Kushandiswa kwakanakisa kwechitima kufamba kuGerman kuri masikati, kusanganisira kutsanya Intercity Express, hazvidi kuchengetedzwa kwechigaro. zvisinei, kana uchironga rwendo rwenyu hapana chakaipa Mugshot zvigaro zvenyu pachine. Wanira hwindo chigaro nokuda girl kana kungoti kusarudza chigaro chako kuitira waunowana kunonyanyisa nyaradzo.
vamwe International nezvitima uye neusiku migwagwa zvakadai Paris, kweBrussels, Venice, kana Copenhagen kuti zvinoda kuti iwe ndishushikane pamberi chebhodho. Kana uchishandisa Save A Train nzvimbo kuti bhuku rako chitima matikiti, zvichaita kutaura kana iwe vanofanira kuita kuchengetedza.
Shandisai chiteshi lockers – Dzidzisai kufamba mu Germany
Nzvimbo zhinji dzechitima dzeGerman dzine mabhangi mazhinji ma Locker mumhando dzakasiyana siyana. Izvi pokugara vaduku guru mukwende. Kana une awa kana kuti pamberi penyu unobatanidza chitima mashizha, isa yenyu mukwende kuva yokuchinjira mbatya kuchikoro, enda mvura yokunwa, kana kuva pfupi tarisa nzvimbo dzakapoteredza.
MuFrankfurt kuna Hanover Zvitima
KweBrussels kuna Hanover Zvitima
KuCologne Hanover Zvitima
Mutengo lockers anosarudza mutengo wavo. Izvi zvinoreva kana uchida zvishoma chekuchengeta zvekudya mukwende, uchava kubhadhara zvishoma ndiEzekieri. Mutengo kuwanda chechitima lockers muGermany riri pakati € 1 – € 5 nokuti 24 maawa kushandiswa.
Vana vanogona Dzidzisai kufamba muGermany mahara
Germany inzvimbo huru afambe nemhuri. On German njanji nezvitima, vana vari pasi pemakore matanhatu vanofamba mahara vasina tikiti rinodiwa. Vana pamusoro 6 asi makore pasi 15 uyewo kufamba mahara kamwe vari pamwe chete yokufamba-kubhadhara mukuru.
Kufunga kutora chitima kumativi Germany? Enda To Save A Train Online kuongorora zvose zvedu oga fares uye kutanga kuronga yako inotevera ushingi! Follow tiri Facebook, Twitter, uye Save A Train Instagram Page kuti onawo yedu inopa matsva uye zvakawanda!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-germany%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
njanji German	Train Travel	chitima kufamba Mazano	travelgermany
Chitima Kufamba, Dzidzisai Kufamba Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Famba Europe
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Dzidzisai Kufamba Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Dzidzisa Kufamba Holland, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Famba Europe
Mazhinji Maguta Anoshamwaridzana Nemabhasikoro muEurope Uye Maitiro Ekuenda Ikoko
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba Germany, Dzidzisa Kufamba Holland, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Famba Europe